जो एक्लै जीवनको रथ गुडाइरहेका छन् – Nepal Press
जो एक्लै जीवनको रथ गुडाइरहेका छन्
२०७७ माघ २९ गते १६:००
भनिन्छ, महिला र पुरुष एक रथका दुई पांग्रा हुन् । सम्भवतः ‘विवाह’ को मर्मले पनि यो भनाइसँग तादाम्यता राख्छ । पुरुष र महिला जब विवाह गरेर श्रीमान्–श्रीमती बन्छन्, अनि जीवनको रथ गुडाउन सहज हुने विश्वास गरिन्छ ।
विवाह एउटा सामाजिक परम्परा हो, तर यसलाई कुनै नियम–कानूनले बाध्यकारी बनाएको छैन । तपाईं २० वर्ष कटेपछि चाहेको समयमा विवाह गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । नगर्न पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । विवाह गरेर सुखद जीवन व्यतीत गरेकाहरू धेरै छन् । अनि विवाह नगरी खुशीसाथ बाँचिरहेकाहरू पनि हाम्रै समाजभित्र छन् ।
सामान्यतया नेपाली समाजमा केटी २० वर्ष र केटा २५ वर्ष कटेपछि विवाहको चर्चा शुरू हुन्छ । पारिवारिक दबाब आउन थाल्छ । ३० वर्षको आसपासमा दबाब उत्कर्षमा पुग्छ । ३५ वर्ष कटेपछि दबाब दिनेहरू शिथिल बन्न थाल्छन् । ४० वर्ष कटेपछि विवाहको सम्भावना घटेर जान्छ । यद्यपि, ४० कटेर विवाह गर्नेहरू पनि छन् ।
जब पब्लिक फिगरको प्रसंग आउँछ, उनीहरूलाई विवाहको बेग्लै दबाब हुन्छ । विवाह गर्न ढिला भयो भने परिवार र आफन्तबाट मात्र होइन, मिडियाबाट पनि बारम्बार सवाल गरिन्छ, कहिले विवाह गर्ने ? ढिला भएन ?
यहाँ हामी केही सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको चर्चा गर्दैछौं, जसले लगातार विवाहको प्रश्नलाई सामना गर्दै तर विवाहलाई पन्छाउँदै एकल जीवन बाँचिरहेका छन् । यस्ता व्यक्तित्व राजनीतिदेखि कलाकारितासम्म छन् । उनीहरुमध्ये कसैले यसपालिको भ्यालेन्टाइन डेमा कोही सहयात्री भेट्लान् त ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले ६० वर्षका भए । उनले विवाह नगर्ने सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरिसकेका छन् । व्यक्तिगत जीवनबारे त्यति खुल्न नचाहने नारायणकाजी विवाहलाई अनिवार्य सोच्दैनन् । ‘एक्लो भएर नै मैले यो किसिमको जीवन बाँच्न पाएको छु’, आफ्नो राजनीतिक व्यस्ततालाई इंगित गर्दै उनी भन्छन् ।
केही वर्षअघि एक टेलिभिजन संवादको क्रममा उनले एक्लो हुँदा आफूलाई जीवनसाथीको अभाव महसूस नभएको बताएका थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सीता दाहालले पनि नारायणकाजीलाई विवाहका लागि थुप्रै पहल गरे तर उनी विवाह नगर्नेमै अडिग रहे । त्यसो त केही समयदेखि उनको नाम आफ्नै स्वकीय सचिवसँग जोडिने गरेको छ । दुई महिना अगाडि एउटा लेनदेनको विवादमा मुछिंदा उनीहरूका युगल तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गरिएका थिए । उनीहरूले भने आफूहरूबीच गलत सम्बन्ध नरहेको स्पष्टीकरण दिंदै आएका छन् ।
पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका स्थायी समिति सदस्य हुन् । उमेरले ६ दशकको यात्रामा रहेका उनी पनि अहिलेसम्म अविवाहित छन् ।
किशोरवयदेखि नै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिएका पोखरेल राजनीतिक व्यस्तताले गर्दा प्रेम–विवाहबारे सोच्न नभ्याएको बताउने गर्छन् । आफूले बिहे नगरे पनि धेरै साथीहरूको विवाह भने गराइदिएको उनको भनाइ छ ।
झण्डै दुई दशकअघि गिरिराजमणिले शहीदका बालबालिका राखेर आधारशिला कम्युन शुरू गरेका थिए । त्यहींका बालबालिका र साथीहरूलाई नै उनी आफ्नो परिवार मान्छन् । पटक–पटक मन्त्रीसमेत भइसकेका पोखरेल भन्छन्, ‘अब त उमेर पनि गइसक्यो । बिहे गर्दिनँ ।’
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहकै स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुषाल अविवाहित छिन् । करिब ६० वर्ष पुग्नै लागेकी पम्फाले पनि आफ्नो सिंगो जीवन राजनीतिमै व्यतीत गरेकी छन् ।
जनमोर्चा नेपालको पहिलो अध्यक्ष बनेकी भुषालले २०३३ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिक करिअर अघि बढाइन् । २०३७ सालमा चौथो महाधिवेशनको सदस्यता लिएकी उनी २०५१ सालमा माओवादी केन्द्रीय सदस्य बनिन् । अहिले नेकपाको प्रभावशाली नेतामध्येकी एक उनी अब विवाह नगर्ने बताउँछिन् ।
जनयुद्धकालमा तत्कालीन माओवादीकै एक चर्चित नेतासँग पम्फाको नाम जोडिएको थियो । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी अनुसार लखनऊमा बस्दा उनीहरूबीच निकटता बढेको चर्चा माओवादीवृत्तमा अहिले पनि हुने गर्छ । प्रचण्डले त्यो बेला पार्टीमा पेश गरेको एक प्रतिवेदनमा नै ‘२०५३ साल असारदेखि फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दाको करिब ९ महिनामा कमरेड … र कमरेड हिमाली (पम्फा) को सम्बन्ध आश्चर्यजनक तीव्रताका साथ अघि बढेको’ उल्लेख थियो । यस मामलामा माओवादीले उनीहरूमाथि ‘सांस्कृतिक विचलन’ को आरोपमा कारबाही समेत गरेको थियो ।
कवि तुलसी दिवस उमेरले ८० वर्ष उकालो लागिसके । जीवनको लामो हिस्सा कविता र लोक संस्कृतिको उत्थानमा बिताएका उनले विवाह गरेनन् । उनका जीवनमा धेरै प्रेमिकाहरू आए तर, विवाह गर्ने सोच उनले कहिल्यै बनाएनन् ।
तुलसी दिवसले आफ्ना प्रेम सम्बन्धहरूका विषयमा सार्वजनिक चर्चासमेत गर्ने गरेका छन् । जीवनमा धेरै प्रेमिका आएकै कारण एउटालाई रोज्न नसक्दा आफ्नो बिहे नभएको उनी बताउँछन् ।
एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘कहिलेकाहीं त एकैपटक दुई–तीन जनासँग प्रेममा थिएँ । मैले आफ्नो प्रेमलाई कहिल्यै नकारात्मक रूपमा लिइनँ ।’
प्रेम र विवाहका विषयमा उनी भन्छन्, ‘हामी प्रेमलाई विवाहसँग जोडेर हेर्छौं । तर, त्यो गलत हो । प्रेम त कसैले कसैलाई दिने सुन्दर उपहार हो, जुन शारीरिक, जैविक वा मानसिक–आत्मिक जसरी पनि हुन सक्छ ।
चर्चित लोकगायिका कोमल ओली केही समयदेखि राजनीतिमा छिन् । उनी अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।
ओलीलाई विवाहको विषयमा पत्रकारले सोध्न थालेको धेरै भयो । जवाफ दिंदा दिंदा उनी थाकिसकेकी छन् । तर, सोध्ने पत्रकार थाकेका छैनन् । अहिले पनि प्रश्न आइनै रहन्छन्, विवाह नगर्ने ? कहिले गर्ने ?
कोमल अब विवाह नगर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेकी छन् । एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छन्, ‘खै, अब त के विवाह गरिएला र ? धेरै विवाहितहरूको अवस्था हेर्दा विवाह गर्ने चाहना नै हराइसकेको छ ।’
कोमल ओलीले लामो समय रेडियो नेपालमा काम गरिन् । उनी कहिलेकाहीं ठट्यौलीमा भन्ने गर्छिन्, ‘रेडियो नेपालकै व्यस्तताले मेरो विवाह भएन ।’
बेला–बेला प्रेमका अभिव्यक्तिमार्फत उनी चर्चामा आउने गर्छिन् । मूड चल्दा उनी आफ्ना विगतका प्रेम प्रसंगहरूबारे पनि खुल्छिन् ।
हास्य–अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौला ४५ वर्षकी भइन् । उनको पनि व्यथा कोमलकै जस्तै छ । दर्शक तथा शुभचिन्तकबाट प्रायः प्रश्नहरू आइरहन्छन्– बिहे कहिले गर्नुहुन्छ ?’
दीपाश्री भन्छिन्, ‘उहाँहरूले मेरो सेटलमेन्टबारे सोच्नुभएको हो । तर, विवाह भन्ने कुरा भाग्यमा भर पर्छ । कसैको भाग्यमा हुनसक्छ, कसैको नहुन सक्छ ।’
आफूले अहिलेसम्म विवाह नगरेकोमा दीपाश्रीलाई कुनै पश्चात्ताप छैन । पहिले पहिले उनलाई विवाह गर्न परिवारबाट धेरै दबाब आउँथे । अहिले त्यो बन्द भएको छ ।
‘पछि म करिअरमा केन्द्रित भएँ । दबाब आउन छाडे । म करिअरमा केन्द्रित भएको हुनाले विवाह नगर्दा पनि फरक पर्दैन’, दीपाश्री भन्छिन् ।
दीपाश्री बाँकी जीवन भाग्यलाई नै छाडिदिन्छन् । ‘बिहे हुन्छ कि हुन्न भनेर भन्न सक्दिनँ । अहिलेसम्म सोचेको छैन । भाग्यमा छ भने त भइहाल्छ’, उनी भन्छिन् ।
दीपाश्रीको नाम उनका सहकर्मी दीपकराज गिरीसँग जोडिने गरेको छ । लामो समयदेखि उनीहरू निकट छन् । हालै एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा हास्यकलाकार जितु नेपालले उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर भनेका छन्, ‘उहाँहरू गाडी मजाले हाँक्ने, लाइसेन्स विनाको जोडी ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा पनि उमेरले ४० पार भइसके । अघिल्लो वर्ष उनी विवाह गर्ने योजनामा थिए । तर, तयारी नपुगेर बिहे हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
‘विवाह त हुन्छ, तर कहिले हुन्छ थाहा छैन । विवाह गर्ने उमेर भइसक्यो’, उनले भने ।
घर र आफन्तहरूबाट पनि नियमित विवाहका निम्ति दबाब आइरहने खतिवडाको स्वीकारोक्ति छ ।
‘पहिल्यैदेखि राजनीतिमा लागियो । व्यस्तताले विवाहबारे सोचिएन । तर, अब बिहे त गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो’, उनी भन्छन् । विवाहका लागि योजना बनाए पनि आफूले सोचेअनुरूपको दुलही नमिलेको खतिवडा बताउँछन् । एकताका कोमल ओली र रामहरि खतिवडाको विवाहको चर्चासमेत चलेको थियो ।
गायक राजेशपायल राई ४५ वर्षका भए । उनलाई पनि प्रायः एउटै प्रश्नले पछ्याइरहन्छ, ‘विवाह कहिले गर्नुहुन्छ ?’
तर, उनीसँग यसको जवाफ कहिल्यै भएन । घर परिवारबाट पनि विवाहको दबाब आइरहन्छ । उनी साइत नै नजुरेर विवाह नभएको भन्दै टारिरहन्छन् । राजेशपायल राईले सेरोगेसीमार्फत बच्चा जन्माउने चाहनासमेत राखेका छन् । पछिल्लो समय उनको नाम एक यूट्युबरसँग जोडिएको छ । यद्यपि, उनीहरू दुवैले आफूहरूबीच कुनै सम्बन्ध रहेको स्वीकारेका छैनन् ।
त्यसो त रेखा थापा र केकी अधिकारीसँग राजेशपायलको निकटतालाई लिएर पनि गसिपहरू बनेका थिए । तर, उनीहरू साथीको सम्बन्धमा नै सीमित रहे । अहिले पनि राजेशपायलले विवाहको सम्भावनालाई टारिसकेका छैनन् । तर कहिले हुन्छ भन्ने जवाफ उनीसँग छैन । यसपटकको भ्यालेन्टाइनमा पनि उनी सिंगल नै रहनेछन् ।
नेकपा नेतृ एवम् पहिलो संविधानसभाकी सभासद् गरिमा साहको पनि विहे गर्ने औसत उमेर कटिसकेको छ । विषम परिस्थितिबीच बाल्यकाल गुजारेर राजनीतिमा होमिएकी साहलाई धेरैपटक विवाहको प्रस्ताव आयो । विवाह प्रस्ताव गर्ने अधिकांशको एउटै शर्त हुन्थ्यो- राजनीति छाड्नुपर्ने । तर, उनले जिन्दगानीमा विवाहभन्दा राजनीतिलाई नै प्राथमिकता दिइन् ।
राजनीतिसँगै कला/साहित्य सिर्जना गरिरहेकी कैलालीकी साहलाई विवाह नभकोमा कुनै पछुतो छैन । जीवनभर राजनीतिमा समर्पित भएर देशको सेवा गर्ने उनको सोच छ । गरिमा विवाहलाई प्राविधिक विषय मान्छिन् ।
प्रकाशित: २०७७ माघ २९ गते १६:००
One thought on “जो एक्लै जीवनको रथ गुडाइरहेका छन्”
नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष’ हाेइन